971 uye 972 dzakabatana: Tel Aviv kuenda Abu Dhabi isingamire paEl Al LY971
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » 971 uye 972 dzakabatana: Tel Aviv kuenda Abu Dhabi isingamire paEl Al LY971
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Investments • Israel Breaking News • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UAE Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
LY 971 Tel Aviv kuenda kuAud Dhabi uye LY 972 AUH kuenda kuTLV nendege dzisingamire kuIsrael El Al Airlines ichave yekutanga pakati peIsrael neUnited Arab Emirates. Mukuwasha weMutungamiri weAmerica, VaDonald Trump uye chipangamazano mukuru, VaJared Kushner, pamwe neMubatsiri weNational Security Adviser, Robert O'Brien vachabatana nevamiriri veIsrael svondo rinouya munhandare yekutanga yekutengesa pakati penyika mbiri idzi. Kana uri ku Abu Dhabi, iro guta guru reUAE, nhumwa idzi dzichava nekushanya nekutengesa pane zvarongwa.
Sekureva kweGoogle Flight Search, LY 971 yakarongerwa kubva Tel Aviv na10.30: 1 mangwanani neMuvhuro uye ivhu 3.05t XNUMX pm muAud Dhabi. Pane musiyano weawa imwe chete pakati penyika mbiri. Kungoita gore kana kupfuura apfuura, Israel haina kana kumboonekwa pamepu yeakaomesa yeAA mureza mutakuri Etihad Airways.
Ndege yeIsrael yendege, mune iyo hurumende yeIsrael iri yavo yegoridhe mugove, hazvizivikanwe kuti yakambobhururuka yakananga kubva kuTel Aviv kuenda kuUAE nguva dzose.
MunaMay ndege yeEtihad Airways inotakura zvinhu kubva kuAud Dhabi yakaita ndege yekutanga inozivikanwa yekutengesa pakati peUAE neIsrael muna Chivabvu nekutumirwa kwevanhu kuPalestine.
Ndege yeEl Al nemusi weMuvhuro imhedzisiro yenyika mbiri idzi dzakabvumiranwa mwedzi uno kutanga hukama hwehukama muchibvumirano chakakwenenzverwa neUnited States of America.
Kuwedzera kune runyorwa rwekubudirira, iyo ndege ichave iri ndege yekutanga yakanyoreswa muIsrael kuyambuka Saudi Arabia Arabia airspace munzira yayo yekuenda kuAud Dhabi, sekureva kwemutori wenhau weIsrael Yediot Ahronot.
Saudi Arabia, iyo isina hukama hwehukama neIsrael, inoramba kurega vatakuri veIsrael vachidarika nhandare yayo, ichirebesa nguva yekuenda kunzvimbo dzekumabvazuva.
971 ndiyo kodhi yenyika kodhi yeUAE, 972 kodhi yenyika yeIsrael. LY 971 ichashanda Tel- Aviv kuenda ku Abu Dhabi, LY 972 ndiyo ichave ndege yekudzoka kubva kuAud Dhabi kuenda kuTel Aviv.
Emirates yanga yatove kuronga ndege kubva kuDubai kuenda kuTel Aviv kuita Turkish Airlines neQatar Airways kutya.